“Waa La I Dhibaateynayaa..” Madaxweyne Kuxigeenka Kenya. |
“Waa La I Dhibaateynayaa..” Madaxweyne Kuxigeenka Kenya.
Qaar kamid ah xildhibaannada siyaasad ahaan tabaacsan Ruto ayaa sheegay ina loo diiday ilaalo, waxayna intaa ku dareen in siyaasadda ku dhisan cabsi gelinta ay tahay mid aysan aqbali karin.
Madaxweyne kuxigeenka Kenya ayaa muddooyinkii dambe u muuqday mid aysan isku wanaagsaneyn madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ay isku xisbi katirsan yihiin, gaar ahaan wixii ka dambeeyay markii uu la heshiiyay hogaamiyaha mucaaradka, Raila Odinga.
Madaxweyne Kenyatta oo horay u ballanqaaday in uu taageeri doona musharraxnimada Ruto marka uu xilka ka dego ayaa dhawaan sheegay in aysan jirin cid uu taageeri doono, shacabkana uu u deyn doonaa in ay doortaan qofka ay rabaan.
William Ruto ayaa u muuqda mid aan ku qanacsaneyn qaabka loo wado barnaamijika dib u heshisiinta BBI ee ay ku heshiiyeen Uhuru iyo Raila, inkastoo markii hore uu soo dhaweeyay.
Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dhawaan xafiiska madaxweyne kuxigeenka lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa fadeexad dhaqaale oo haatan maxkamdeynteeda ay socoto.
Sidoo kale askari kamid ah ilaalada gaarka ah ee madaxweyne kuxigeenka ayaa la dilay, baaritaanka arrintaasina haatan waxaa gacanta ku haya laamaha ammaanka.
Raila iyo Ruto oo siyaasad ahaan aan isku wanaagsaneyn ayaa mid walba waxaa la rumaysan yahay in uu leeyahay damac siyasadeed oo ku aadan qofka badeli doona madaxweyne Kenyatta oo muddo xileedkiisu dhamaanayo sanadka 2022, waxaa se aan la ogeyn cidda uu taageeri doono madaxweynaha haatan xilka haya.